PressReader - Isolezwe: 2017-11-13 - Iseyinkinga eyamakomiti anikezela ngemisebenzi
Iseyinkinga eyamakomiti anikezela ngemisebenzi
Isolezwe - 2017-11-13 - IMIBONO -
UMA uhulumeni waKwaZulu-Natal oholwa yi-ANC uzimisele ngokuqeda inkohlakalo nokuphucula uhlelo lokulethwa kwentuthuko komasipala kufanele uqinisekise ukuthi izimeya, ngisho noma ngabe zihambisana naliphi iqembu lezombusazwe, ziyaqinisekisa ukuthi uhlelo lokukhishwa kwamathenda nokusebenza kwamakomiti anikezela ngemisebenzi kahulumeni kuvulelekile emphakathini.
Ekugcineni kuba yila makomiti abheka ukuthi ngubani othola umsebenzi noma inkontileka ngoba anikwe amandla athe xaxa ekwenzeni kahle kohulumeni basekhaya anomthelela nasemnothweni wendawo. Noma kunjalo, kuvame ukuthi kungabonakali ukusebenza kwamakomiti amaningi futhi nezinqumo ezithathwa yiwona azilandelelwa. Kokunye izinqumo zawo zilandelelwa uma sekunenkinga.
KwaZulu-Natal udaba lokuhluleka kokusebenza kohulumeni basemakhaya luyaqhubeka nokunganakwa. Ngikhuluma nje emkhandlwini uMkhanyakude, umndeni owodwa kwemine awunawo ugesi futhi umndeni owodwa kwemithathu awunawo amanzi ahlanzekile. Okunye uthola ukuthi imindeni eminingi ayinalo uhlelo oluqondile lokuthuthwa kwendle.
Eqinisweni kunombuzo okumele ubuzwe othi kungani i-ANC eKZN ingazimisele ukwenza kuvuleleke emphakathini ukusebenza kwamakomiti aqoka abathola imisebenzi kahulumeni?
E-Western Cape nakwabanye omasipala abaphethwe yi-DA kunobufakazi bokuthi uhlelo oluvulelekile lokunikezela ngemisebenzi kahulumeni luyasebenza. Okuhlekisayo wukuthi i-ANC iqale ukusebenzisa lolu hlelo e-Gauteng emva kokuba isibone ukuthi isengozini yokulahlekelwa wumkhandlu waseGauteng neTshwane. Namuhla uhulumeni kule mikhandlu usufake nezikhangisi emabhodini ucela izakhamuzi ukuthi zilweseke lolu hlelo.
Kuyiqiniso elingephikwe ukuthi uhlelo olwaziwa ngeBroad Based Black Economic Empowerment lutholakale lusebenza kahle ezikhathini eziningi ngaphansi kukahulumeni owenza konke obala futhi ikakhulukazi lapho kuvuleleke khona ukusebenza kwamakomiti anikezela ngemisebenzi kahulumeni. Kwenzeka okuhlukile lapho izinqumo zithathwa emfihlakalweni futhi lapho uthola izinkampani ezinkulu kuyizona ezithola amathenda nezinkontileka. Uthola ukuthi kuhlomula abantu ababodwa banganakwa osomabhizinisi abancane nabantu abadinga usizo kuhulumeni.
Iqiniso lithi, uma ngenza isibonelo nje, uZama Khumalo onebhizinisi lakhe elincane lokuphekela imicimbi le KwaNongoma eKZN ngeke abangisane nabanikazi besitolo esikhulu sokudla esenza inzuzo eningi uma sekubhekwa ukuthi ubani onganikwa ithenda lokuphekela umkhandlu isikhathi esingangonyaka.
Okokuqala njengosomabhizinisi osafufusa ubhekene nebhizinisi okukudala laba khona neselidlondlobele. Okwesibili, izinqumo zithathelwa emakhosombeni akanalwazi olugcwele ngangakwenza, akazi bantu abasezikhundleni eziphezulu – lokho kukodwa kunciphisa amathuba okuthi asizakale. Okunye okuqeda amathuba okuthi asizakale wukuthi uqhudelana nedlanzana labantu elinenkohlakalo elisebenzisana nosomabhizinisi abanenkohlakalo. Uma ubheka lezi zimo akumangazi ukuthi ibhizinisi elincane njengelakhe ligcine linganikwanga inkontileka yomsebenzi.
Kungumkhuba omdala we-ANC ukugcina uhlelo lokusebenza kwamakomiti anikezela ngemisebenzi kahulumeni luyimfihlo. Yize iKZN isilahlekelwe omasipala abaningana okhethweni lohulumeni basekhaya oludlule ngenxa yesivumelwano se-IFP ne-DA, i-ANC isazozama la maqhinga azanywe ozakwabo e-Gauteng.
I-DA izibophezele ekufakeni ingcindezi kwi-ANC kulolu daba. Umuntu ongelutho okumele ahlomule kuhulumeni wasekhaya futhi lokho kuqala ngokuthi kube nencazelo yokuthi kungani kuthathwe ezinye izinqumo. Kafishane nje abantu banelungelo lokwazi. I-DA izibophezele ngokuxoxa nobuholi be-IFP ngalolu daba ezindaweni abaphethe kuzona.
Ukuthathwa kwezinqumo ngokuvulelekile kuzala ukubusa kahle, ubuholi obunenqubekela phambili nokuqinisekisa ukuthi abantu banamathuba alinganayo uma beqhudelana befuna imisebenzi kahulumeni. Asikho isizathu esingaba yimbangela yokuthi uhulumeni aqhubeke afihle ukusebenza kwamakomiti. Sekusemahlombe ezimeya KwaZulu-Natal ukuqinisekisa ukuthi lo mkhuba uyaqedwa.
■UHlanganani Gumbi yiPhini likaSotswebhu we-DA esiShayamthetho KwaZuluNatal futhi ukhulumela i-DA esifundazweni kwaCOGTA nakwaSports and Recreation. Uke waba yikhansela eThekwini.